Company Hordhac - Ningbo YH Haydarooliga Makiinado Factory
Mid ka mid ah rakiban Piece
Mid ka mid ah Wire tidcan tuuboyinka
Laba Wire tidcan tuuboyinka
Wire muquuninta tuuboyinka
Tubbo Skiving Machines
Mashiinnada Jarida tubbo
Haydarooliga tubbo Assembly
Handarraabbadeedii iyo Loos
Saaraha A xirfadeed iyo iibiyaha of rakiban Haydarooliga, ferrules, tuubooyinka, mishiinada iyo shirarkeeda tuubada.
Ningbo YH Haydarooliga Makiinado Factory kor loo dhigay magaalo qurux badan, Ningbo, taasoo caan ku tahay dekedda Beilun. YH Haydarooliga waa warshad gaar ah in ay soo saartaa iyo sahay uga taxeen oo tuuboyinka caag, rakiban tuubada, ferrules tuubada, kiniisadaha tuubada kar sare, mashiinada crimping, iwm Sida saaraha ah, YH ayaa shaaca ka on raad tayo fiican leh ujecel hoose. Sidaas awgeed, waxaan xakameeyo qalabka taas oo
waa in laga iibsan shirkadaha rasmi steel iyo heerka iyo tayada ugu fiican. Oo annagu waannu ku qaadeen nidaam isku dhafan-soo-saarka taas oo ku salaysan yahay tayo diirada.
Sida iibiyaha ah, waxyaabaha waxaa laga dhoofiyey dunida iyo heer qaran iibiyey in ka badan 8 sano. Waxaan heysanaa koox caqli marketing kuwaas sahaminta suuqyo cusub, horumarinta macaamiisha, xalinta dhibaatooyinka, iyo adeega macaamiisha amarada si fiican. Waxaan nahay cooperator tartan iyo saaxiibtinimo iyo Hadafkeenu waa in faa'iidada iyo iskaashiga fiican muddo dheer.
Sidee baynu inta?
Control adag oo tayo leh, Wax ku ool ah iyo taageero-waqtiga dhabta ah, Qanacsanaa ka dib-iibka adeegga
Waxaan tixraac ku adag afar dhinacyo (control geliyo wax → gacanta line-soo-saarka → QC gacanta waaxda → gacanta waaxda SKA) iyo nidaamka tayada si loo hubiyo in alaabta oo dhan waa dhawrsan hor dhigi. Habka Our wax soo saarka ayaa siddeed tallaabo: diyaarinta waxyaabaha; qalab processing lathe; CNC processing mashiinka; burrs iyo nijaasta ka saareen, zinc dahaadhay, tayada final iyo jeegga tiro; Cabaynta iyo bixinta. In caadi ah, waxaan kuu diyaarin doonaa kormeerka
afar jeer inta lagu guda jiro soo saarka, waayo, mid si. Products of dhinacyada midigta iyo dalabaadka hubiyaa waxaa lagu ridi doonaa tallaabada xigta.
Toddobaadkiiba hal mar, waaxda QC our hubin doonaan mashiinada CNC iyo qalabkii kale si loo hubiyo in ay shaqo wanaagsan.
The taageero wax ku ool ah oo dhab ah-time waa mid aad u muhiim ah in macaamiisha. Macaamiisheena ka heli kartaa by our qalab keli online (Skype) oo been hoose ee website. Ama email noogu soo dirto wixii waxyaabaha xiiseynaya, shuruudaha, ama dhibaatooyin. Waayo, xiriirka deg dega ah, our call waa la heli karaa 24 saacadood maalintii. Sidoo kale waxaan soo ururin dhan su'aalaha iyo jawaabaha tusay on FAQ. Qeybiyaha ah oo lagu kalsoonaan karo, waxaan sii xalinta dhibaatooyinka ku filan oo farxinno.
Laakiin arrinta ma sida adag aan xakameeyo oo tayo leh iyo sida xirfadeysan aannu u adeegnaa, ma 100% wax soo saarka waa kaamil ah. Sidaas awgeed, waxaan u bixiyaan adeeg ka dib-iibka oo damaanad qaadi kara alaabta oo tayo leh iyo shirkadda niyada aynu nahay. Waxaan ku adkaysanayaan on addeecaya hoos seddex gool:
Falsafada Our wax soo saarka:
→ tayo wanaagsan; Curinta iyo ilaalinta deegaanka
Ra'yiga Our marketing:
→ faa'iidooyinka Mutual; Dherginaya baahidii suuqa; Siinta wax soo saarka oo tayo fiican iyo adeegga macaamiisha
Rogo oo adeeg Our:
→ soo dhaafin xuduudiisa aad u jecel yihiin; Si aad u noqoto shirkad ka badan la isku halayn karo iyo inremantiga
Jiangshan Town, Degmada Yinzhou, Ningbo, Shiinaha
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Talooyin , Products Featured, Sitemap , Mobile Site
Haydarooliga tubbo habboona , qalabka naxaas ton Pex tuuboyinka , Carbon Steel Haydarooliga tubbo rakiban, Fittings Hydraulic, Carbon Steel Haydarooliga rakiban , tubbo Crimping Machine , All Products